चुरोट किन्न जाँदा सुसान्तसँगको जम्का भेटमा… – NepalChurch.com
by Kumar Singh Bist
in Articles, Literature, Story
गिटार सिक्ने मौकामा चर्च पुगेका गाब्रीएल शर्माको जीवन गवाही
काठमाडौ। परमेश्वरले आफ्नो राज्यमा मानिसलाई कस्तो अवस्थामा वोलाउनु हुन्छ भन्ने कुरा यसै ठम्याउन सकिन्न। येशूलाई विश्वास गर्ने मानिसपिच्छे आआफ्नै कथा र कारण हुन्छन्। कोहि विरामी अवस्थामा भएर जाँदा येशूलाई ग्रहण गर्न पुग्छन् त कसैको शान्ति खोज्नेक्रममा येशूसँग भेट हुन पुग्छ। मानिसका आआफ्नै टर्निङ प्वाइन्ट छन्।
हाल इस्राएलमा रहनु भएका गाब्रिएल शर्माको पनि एक घत लाग्दो कथा छ। करिव एघार वर्षको वाल्यअवस्थामा आफ्नो जन्मघर सुर्खेत छोडेका गाब्रिएल शर्मा आफन्तको लहलहैमा भारत भागेका थिए। सात कक्षाको परिक्षाको नतिजा राम्रो नल्याएको भन्दै उनका वुवाले हप्काएपछि शर्मा घर छोडेर भारत लागेका थिए।
उनले भारतमा २६ वर्ष बिताए। भारतमा पुगेपछि उनले हदैसम्म दुःख पाए, त्यहाँ उनलाई सोचेजस्तो भएन। जागिर गर्नेक्रममा भारतका विभिन्न शहरमा उनले काम गरे। जहाँ गए त्यही उनले दुख मात्र पाए। एकदिनको कुरा हो। घर मालिकले मचाहिँ अफिस जान्छु, आज तिमीले टिभी सफा गरेर राख्नु भनेका रहेछन्। शर्माले घरको टेबुलमा राखिएको टिभि सेटलाई धारामा लिएर साबुन पानी लगाएर धोइदिए। अनी धोएर ल्याएर धोएर टेवुलमा जस्ताको तस्तै राखि दिए। साँझ परयो मालिक घर फर्किए, टिभी अन गर्दा अन भएन। मालिकले शंका लागेर शर्मालाई सोधेछन् आज टिभी अन किन भएन।
शर्माले टिभीलाई साबुन पानीले सफा गरेको बताए छन् । टिभीलाई धारामा लगेर साबुन पानीले धोएको थाहा पाएपछि मालिकका छोराले शर्मालाई चर्पीमा लिएर नाङ्गो पारेर धुलाई गरे। अनी त्यसको पछिल्लो दिन उनी उक्त घरबाट फरार भए। त्यहाँ उनले मासिक १५० तलव थियो। जीवनमा कहिल्यै टिभी नदेखेका शर्माले मालिकले टिभी सफा गर्नु भनेपछि मालिकप्रति वफादार बनेर टिभीलाई पनि मान्छेको जस्तै गरि साबुन पानीले धुनुपर्छ भन्ने लागेर उनले टिभी सेटलाई धोएका थिए।
भारतमा रहँदा शर्माले भारतका विभिन्न स्थान र शहरमा काम गर्ने अवसर पाए। पछिल्लो समय उनी भारतस्थित इस्राएल राजदुतावासमा चालकको काम पाए। एकदिन कोठामा वसि राखेको अवस्थामा आफ्नै साथीले येशूको वारेमा बताएपछि शर्माले उनको मुखमा एक मुक्का हानेर दुई दात झराईदिएका थिए।
येशूको नामै सुन्न नचाहाने शर्मा एक आइतबारको दिन आफ्नो डेराबाट चुरोट किन्न भनि नजिकैको दोकानमा जाने बेलामा सुसान्त तामाङ नाम गरेका व्यक्तिसँग भेट भयो। तामाङले काँधमा गिटार वोकेका थिए, आइतबारको चर्च सेवामा जाँदै थिए। उनीहरुबीच पहिलेदेखि नै चिनजान थियो।
सुसान्तले सोधेछन् ग्राबिएल तिमी कहाँ जान लागेको ? ग्राबिएलले भने म दोकानमा चुरोट किन्न जान लागेको। सुसान्तले भनेर्–चुरोट स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ बरु हिड मसँग चर्च जाऔं ’। ग्राबिएलले मानेनन्। म चर्चचाहिँ जान्न वरु चुरोट किन्न जान्छु भनेर अटेरी गरे ग्राबिएलले।
अति गरेपछि नमानेपछि सुसान्त पनि क्या बाठो, उनले गाब्रीएललाई भने म तिमीलाई गिटार सिकाइदिन्छु, चर्चमा जाउ भने। अन्ततः ग्राबिएल राजी भए सुसान्तको प्रस्ताव स्वीकार्न। अनी त्यही दिनदेखि चर्चमा गिटार सिक्ने मौका छोपेर गाब्रीएल सुसान्तसँग चर्चमा गए। चर्चमा गएपछि उनले गिटार त सिकेनन् तर येूशूलाई आफ्नो व्यक्तिगत मुक्तिदाताकोरुपमा ग्रहण गर्ने मौका पाए। जीवनमा गिटार भन्दा ठूलो चिज चर्चमा सिक्ने अवसर पाए। त्यही दिन देखि नै गाब्रीएलले आफ्नो जीवन येशूमा अपर्ण गरे। अनी विस्तारै मद्मपान र धुमपानको लतबाट छुटकारा पाए। चुरोट किन्न जाँदा सुसान्तसँगको जम्का भेटले गाब्रीएल शर्माको जीवन येशूमा परिर्वतन भयो।
हाल उनी इस्राएलमा छन्। त्यहाँको संयुक्त नेपाली चर्च तेलअभिवमा सेवा गर्दै आएका छन्। कुनै दिन येशूको सुसमाचारको वारेमा सुनाउने व्यक्तिलाई मुक्काले हिर्काउने शर्मा अन्ततः गिटार सिक्ने मौकामा चर्च गएपछि आफ्नो जीवन येशूलाई अपर्ण गरे।
शर्माको जीवन गवाही यतिकैमा समाप्त हुँदैन। येशूलाई ग्रहण गरेपछि सुर्खेतस्थित आफ्ना दाजुहरुबाट ठूलो सतावटको सामना गर्नु परयो उनले। येशूमा विस्वास गरेकै कारण उनका दाजुहरुले आमावुवाबाट पाउने सम्पत्ति तथा जमिन पाएनन्। उनका दाजुहरुले की येशूलााई छोड कि त जमिन रोज भन्दा शर्माले जमिन छोड्न राजी भए तर येशू छोडेनन्। उनी भन्छन् मैले हक दावी गरेर पाउनु पर्ने सवै सम्पत्ती दाजुहरुलाई नै छोडी दिए। उनले दाजुहरुलाई सुसमाचार सुनाएर येशूमा त ल्याउन सकेनन् तर शर्माले आफ्ना वृद्ध आमावुवालाई भने येशूमा ग्रहण गराए। उनका आमावुवा स्वर्गीय भइ सक्नु भएको छ।
यो जीवन गवाहीको पाठः अवस्था र व्यक्तिपिच्छे सुसमाचारको अप्रोच फरक हुनुपर्छ। कहिलेकाही मानिसलाई सिधैं सुसमाचार प्रचार गर्नुभन्दा पनि त्यो व्यक्तिको मनोविज्ञान वुझेर सुसमाचार अप्रोच गर्दा फलदायी परिणाम आउन सक्छ।
असार ८ गते (भोलि)बाट सबै आन्तरिक उडान रोक्ने वायुसेवा कम्पनीहरुको घोषणा ! विभिन्न मागहरु राख्दै वायु सेवा कम्पनीहरुले माग पुरा...